Mpanao fanafihana mitam-piadiana izy ireo. Niainga avy amin’ny fampitam-baovao avy amin’ny olona tsara sitrapo ny fitadiavana ka nahazoana azy roalahy ireto tao Tsarahonenana « Carreau 3 », raha ny fanazavana. Hatao famotorana izy ireo, karohina ihany koa ny namany. Saika manerana ny Nosy no manjaka ny asan-jiolahy. Raha ny teto an-drenivohitra izao, dia vao afak’omaly no nisy fanafihana nitam-basy natao ny mpanao “cash point” anankiray. Jiolahy roa nitam-basy sy antsy no namely azy ka naratra ary lasa ny vola iray sakaosy.